Public Health in Myanmar: May 2012
Posted by Thurein Hlaing Win 1 comments
Posted by Dr.Thurein Hlaing Win (www.academicmedicines.blogspot.com
တချိန်တုံးက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တယောက် ပြည်ပခရီးတခု ထွက်တော့ အိန္ဒိယ-လေကြောင်းလိုင်းကို စီးရတယ်။ မသိလို့ သွားစီးတာ။ "အဲယား-အိန္ဒိယ" ကို အိန္ဒိယန်းတွေတောင် စီးချင်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဝိုင်မပါ၊ ဘီယာမတိုက်၊ လေယာဉ်မယ်တွေက ဗိုက်ထွက်လို့။ သူ့ဥပဒေအရ အသက်ကြီးလဲ လေယာဉ်မယ် ဆက်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒေါ်ဗိုက်ထွက် လေယာဉ်မယ်များက ညစာကြွေးခါနီး ခရီးသည်တိုင်းကို ဟင်းလျာနှစ်မျိုးထဲကနေ အသားဟင်း စားမလား၊ အသီးအရွက်ဟင်း စားမလား မေးတာပေါ့။
(ဗိုလ်) လိုပြောတာပေါ့လေ။ သူတို့သုံးတဲ့ စကားလုံးက (ဗက်ခ်ျ-အော်-နန်းဗက်ခ်ျ)။ ကျွန်တော့်လူက ပဌမခရီးထွက်ရတာမို့ အဓိပ္ပါယ်ကို အလွယ်နှင့် မကောက်နိုင်ပါ။ သူတို့ အသံထွက်ကလဲ သိတဲ့အတိုင်း။ Non (နန်း) ဆိုသည်မှာ အနုတ်သဘော၊ မပါ-မရှိတဲ့သဘောလို့ ကောင်းကောင်း သိထားယုံမက အိန္ဒိယနိုင်ငံသားအများက အသား မစားကြောင်းလည်း သိထားတာမို့၊ (နန်း) ကို မရွေးဘဲ၊ (ဗက်ခ်ျ) လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အမှန် ဒီကောင်က အလွန် အသားစားကြူးသူပါ။ လာပေးတော့ အာလူး၊ ပဲဟင်း နှဲ့ ရိုတီး။
(ဗက်ဂျီ) လို့ ပြောလေ့ရှိတဲ့ အသားမစား-အသီးအရွက်စားခြင်းဟာ ဘာသာရေးသာမက ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်ရင်လည်း အကျိုးများစေတာတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သုတေသန အသစ်တခုအရ စားသောက်မှုပြဿနာ ရှိတာကို တွေ့လာရတယ်။ ဒီနှစ် ဧပြီလ အမေရိကန် အခြေစိုက် ဆီးချိုအသင်းကနေ လူပေါင်း ၂၅ဝဝ ကျော်ကို သုတေသန လုပ်တာတဲ့။ သိတဲ့အတိုင်း သူတို့အမေရိကားမှာက အစာရေစာ မဝလင်တဲ့ပြဿနာ မရှိပေမဲ့၊ (အိုဗာဝိတ်) က တကဲ့ဒုက္ခ။ ဒီတော့ တချို့က သက်သတ်လွတ်နည်းကို သုံးကြည့်တယ်ပေါ့။ ဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (ဗက်ဂျီ) တွေမှာ နှစ်ဆ၊ လူငယ်လူရွယ် (ဗက်ဂျီ) တွေမှာလည်း နှစ်ဆနီးပါး၊ ကျန်းမာရေးအရ မသင့်သည့်နည်းများကို သုံးခဲ့ကြသည်လို့ တွေ့ရှိရသတဲ့။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ Binge eating ဟုခေါ်တဲ့ တခါစားရင် အများကြီး စားတဲ့အကျင့်တဲ့ဗျာ။
အစားကြူးရောဂါဆိုတာ ရှိသဗျ။ သဲထိတ်ရင်ဖို ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း လက်ထဲက အာလူးကြော် အထုပ်ကြီး တထုပ်လုံး အမှတ်မထင် ကုန်စင်အောင် စားတာလဲ ဒီစာရင်းထဲ ထည့်နိုင်တယ်။ တကယ်ကို အစားမြင် မနေနိုင်အောင်စားတဲ့ အဆင့်ရောက်ရင် မလွယ်တော့ဘူး။ အလုပ်ကြမ်း လုပ်ရတဲ့ ယောက်ျားတယောက် တနေ့မှာ ကလိုရီ ၃ဝဝဝ ထက်ပိုမလိုပါ။ (ဘင့်ခ်ျ)သမား တယောက်ဟာ ကလိုရီ တစ်သောင်း-နှစ်သောင်း စားနိုင်တယ်ဆိုဘဲ။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အဝလွန်၊ အစားလွန်တွေကုဘို့ အထူးကုအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ရတယ်။ စိတ်အထူးကုလဲ ပါရတာပေါ့။ သူစားတာ သူများ မသိအောင် ဆိတ်ကွယ်ရာနေရာ ရှာရတာတို့၊ စားပြီးသား ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ ပုလင်းခွံ-ဘူးခွံ ဖွက်ရတာတို့၊ အစားမြင် ငန်းငန်းတက် ဖြစ်ချင်တာတို့ဟာ အမူအရာကအစ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ သူတို့ကို ဗမာလိုဖတ်တတ်ရင် ဒါလေးဖတ်ခိုင်းလိုက်နော်။
တခါက ကျွန်တော် ဒေလီကနေ ဘုံဘေ (မွန်ဗိုင်လို့ မပြောင်းခင်ကပါ) ကို မီးရထားနဲ့ ခရီးသွားရပါတယ်။ ဘုံဘေ အနားက ဓမ္မဂီရိကို အသွားပေါ့။ ဆရာကြီး ဂုန်အင်ကာရဲ့ဝိပဿနာ-ဓမ္မရိပ်သာ ဌာနချုပ်ရှိရာပါ။ ရထားပေါ်မှာ ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ တွေ့ရတယ်။ သူက ဟာ့ဓမ္မဂီရိ သိပ်ကောင်းတယ်။ ဆယ်ရက်စခန်း သူဝင်ပြီးပြီတဲ့။ အိန္ဒိယမှာက ဗုဒ္ဓဘာသာ သိပ်ထွန်းကားတာ မဟုတ်လို့ ကုလားတယောက် အခုလို ဝိပဿနာစခန်းဝင်တာ ကြားရတော့ ကျွန်တော် အတော်ကို ဝမ်းသာ ပီတိဖြာသွားတယ်။ အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများစုက ငါးပါးသီလ သိချင်မှသိမယ်၊ ဒေါက်တာအမ်ဘာကာ ကိုတော့ ဘုရားလို ကြည်ညိုကြတာကလား။
ကျွန်တော့် ခရီးသွားမိတ်ဆွေက ဗုဒ္ဓဘာသာတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ သူတို့ဆီမှာ ဇာတ်နိမ့်တွေဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့မှ သူ ဝိပဿနာစခန်း ဝင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် အစစ်ကို သိလာရတယ်။ သာဓုခေါ်ပေတော့ဗျို့။ ဆယ်ရက် လုံးလုံး ဥပုသ်စောင့်ရ၊ သက်သတ်လွတ် တနပ်သာ စားရတာကြောင့် သူ့ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချင်လို့တဲ့။ သူ့ဗိုက် တကယ် ကျသွားခဲ့ပါသတဲ့ဗျာ။ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ၊ အစားလျော့၊ ဝိတ်ချဘို့ ဝိပဿနာစခန်းဝင်ကြစို့။
(အော်ဂဲနစ်) ဆိုတာဘာလဲ။ ကျောင်းစာ သင်ဘူးသူတွေတောင်မှ ခေါင်းရှုတ်ရတဲ့ စာလုံးပါ။ Organic ကို Carbon ပါတာတွေကို လေ့လာတဲ့ ဓါတုဗေဒ လို့သာ သင်ရတယ်။ "စားစရာလဲ မဟုတ်ပါလား။" နောက်မှ သိလာတာက "ဈေးလည်းကြီး၊ သီးသီး သန့်သန့်လည်း ရောင်းတဲ့ စားစရာတွေကို ခေါ်ကြတာကိုး"။ ဘာကွာလို့လဲ။
Sat, May 26, 2012 at 8:54 AM
အစားအသောက်နဲ့ သွေးအားကောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါလား။ ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာ Healthy eating ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ စားသောက်မှုမရှိဘူး။ မရှိတာက ကျန်းမာရေး ပညာပေး အသိတရား မကြွယ်ဝလို့ပါဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင် ဘယ်လိုစားသင့်တယ်၊ ဘယ်လို အစာမျိုး စားသင့်တယ်၊ ဘယ်လို အစာမျိုးက ဘာကို အကျိုးသက်ရောက်တယ် ဆိုတာ ရေးပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
စာ ၅ ပုဒ် တင်လိုက်ပါတယ်။
၁။ Nutrition အာဟာရ
၂။ Nutrition Facts အမြစ်-အသဲ ခွဲသိရအောင်
၃။ Organic Food (အော်ဂဲနစ်)
၄။ Eating Habit (1) အမေရိကန် ဆရာဝန်တယောက်နဲ့ (အင်တာဗျူး)
၅။ Eating Habit (2) သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အား ရေ၊ (အမိုင်နိုအက်စစ်)၊ (ဖက်တီးအက်စစ်)၊ (နူးကလီးရစ်အက်စစ်)၊ သကြား၊ (ဖိုင်ဗာ)များ ဖြစ်သည့် (ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်) စသည်တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ယင်းဓါတ်ပေါင်းများသည် (ကာဗွန်)၊ (ဟိုဒရိုဂျင်)၊ (အောက်စီဂျင်)၊ (နိုက်ထရိုဂျင်)၊ (ဖေါ့စ်ဖါးရပ်စ်)၊ သံဓါတ်၊ သွပ်ဓါတ် စသောဓါတ်များပါဝင်သည်။ ၄င်းတို့အား စုပေါင်းလျက် (ဟော်မုန်း)၊ (ဗီတာမင်)စသည်တို့ ဖြစ်လာသည်။ စားလိုက်သည့် အစားအစာများအား အစာခြေစနစ်မှနေ၍ အစာကို သွေးထဲ ရောက်အောင် စုပ်ယူနိုင်သည်အထိ အဆင့်ဆင့် ခြေပေးရသည်။
3. Fats အဆီ၊
4. Vitamins ဗီတာမင်များ၊
6. Fiber (ဖိုင်ဗာ)နှင့်
Protein အသားဓါတ်ဟုလူသိများသော ပရိုတင်းတွင် မရှိမဖြစ်သော Essential Amino Acid (အမိုင်နို-အက်စစ်)များ ပါဝင်သည်။ လူ၏ပျက်စီးသွားသော (တစ်ရှူး)များ၊ (ဆဲလ်)များ အစားထိုးရန်၊ အသစ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် အသုံးကျသည်။ အသား၊ ပဲ၊ ငါး၊ ဥ၊ အစေ့အဆံ၊ နို့၊ နို့ထွက် ပစ္စည်းများကရရှိသည်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၇ဝ ကီလို ရှိသူအတွက် တနေ့လျင် ပရိုတင်း ၇ဝ ဂရမ်လိုအပ်သည်။ (ဖိုင်ဗာ) ဆိုသည်မှာ အသီးအနှံများတွင် ပါဝင်သည်။ ၄င်းကိုမစားက ဝမ်းချုပ်စေသည်။
Cholesterol (ကိုလက်စတီရော) ဆိုသည်မှာ အစားအစာထဲတွင် ပါဝင်သော အဆီတမျိုးဖြစ်သည်။ လိုအပ်သော်လည်း များပါက သွေးကြောလေးများ၏နံရံတွင် လာစုသောကြောင့် သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဝင်လာသည်။ တိရစ္ဆာန်အဆီ-အရွတ် များ၌ (ကိုလက်စတီရော) ပါဝင်သည်။ (မာဂျရင်း)၊ (ကွတ်ကီးစ်)၊ (ခရက်ကား)တို့မှာလည်း များသည်။ အဆီနည်းသော ဆီများမှာ corn, canola, olive, safflower, soybean and sunflower တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်သော ဆီများအား Trans fats or trans fatty acids ဟုခေါ်သည်။ ဝါစေ့ဆီ၊ ပဲပုတ်စေ့ဆီများကို ဟိုက်ဒရိုဂျင် ထပ်ပေါင်းထည့် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးခံ၊ အစားအသောက်ကလည်း အရသာထူးလာစေသည်။ အဆိုး (LDL) နှင့် အကောင်း (HDL) နှစ်မျိုးရှိသည်။ အဆိုးများလျင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း (စထုပ်ခ်)၊ ဆီးချို အမျိုးအစား ၂ ရနိုင်သည်။ အဝလွန်၊ အသဲ၊ ကင်ဆာ၊ အဇာမိုင်ယားရောဂါများလည်း ဖြစ်စေသည်။ ပြောင်းရန်မလိုဘဲ နွားနို့၊ အမဲ-ဆိတ်-သိုးအဆီ၊ ထောပတ်၊ မာဂျရင်း များတွင် (ထရန့်ဆီ) ပါနေပြီးဖြစ်သည်။
Vitamin A (Retinol) ငါးကြီးဆီ၊ အသဲ၊ ဥ၊ နို့နှင့် နို့ထွက်အစာများ၊ မုန်လာဥနီမှာ ပါဝင်သည်။ အရေပြားနှင့် အပေါ်ဖုံးလွှာများ ကောင်းစေရန်၊ အရိုးကြီးထွားရန်၊ ဆဲလ်များအသစ်ပြုပြင်ရန်၊ ခုခံအားကောင်းရန်၊ ကြက်မျက်သင့်ရောဂါ ကာကွယ်ရန်။
Vitamin B 1, Thiamine (ရိစ်)၊ ဥ၊ အသဲ၊ အစေ့-အဆံ၊ အသားတို့မှာ ပါဝင်သည်။ (ဗယ်ရီဗယ်ရီ)ခေါ်ထုံနာ-ကျင်နာ ရောဂါကို ကာကွယ်သည်။ ဆန်စေ့၏ အပေါ်ယံလွှာမှာ ပါဝင်သဖြင့် ရေခမ်းချက်စာပါ။
Vitamin B 2, Riboflavin နို့နှင့် နို့ထွက်အစာများ၊ ဥ၊ အသဲ၊ အသီးအရွက်၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ ရိစ် တို့မှာပါဝင်သည်။ ချို့ တဲ့ပါက ကျီးကန်းပါးစပ်နာဖြစ်စေသည်။
Vitamin B 12 (Cobalamin) (ရိစ်)၊ နို့နှင့် နို့ထွက်အစာများ၊ ဥ၊ အသဲ၊ ငါး၊ အသားတို့မှာ ပါဝင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွား စေရန်၊ (ဆဲလ်) တည်ဆောက်ရန်၊ သွေးနှင့် အာရုံကြော ကောင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၄င်းနည်းပါက Pernicious Anaemia ဖြစ်စေသည်။
Vitamin C (Ascorbic Acid) စိမ်းသော အသီးအရွက်များ၊ အသီးအနှံများမှာ ပါဝင်နေသည်။ ချဉ်သောအသီးများ (သံပုရာသီး၊ ရှောက်သီး၊ ဆီးဖြူသီး) အရိုး၊ သွား၊ သွားဖုံး၊ သွေးကြော၊ အရွတ် ကောင်းစေသည်။ ခုခံအားလည်း ကောင်းစေသည်၊ အနာကျက်စေသည်။ ချို့တဲ့ပါက Scurvy ရောဂါ ရစေသည်။
Vitamin D ငါးကြီးဆီ၊ နို့ထွက်အစာများမှာ ပါဝင်သည်။ နေရောင်ကြောင့် Vitamin A မှ Vitamin D ဖြစ်လာစေသည်။ အရိုးတည်ဆောက်ရန် အသုံးကျသည်။ ချို့တဲ့ပါက Rickets အရိုးပြော့ရောဂါဖြစ်စေသည်။
Basal Metabolic Rate (BMR) လူတိုင်း မည်သည့် အလုပ်အကိုင်မျိုးမှ မလုပ်ဘဲ နေလျင်ပင် အသက်ရှင်နေနိုင်ရန် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများ အလုပ်လုပ်နေနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အနည်းဆုံး လိုအပ်ချက် (ကယ်လိုရီ)ကို ခေါ်သည်။ ၄င်းကလိုရီမှာ လူတယောက်နေ့ စဉ် လိုအပ်ချက် စုစုပေါင်း၏ ၆ဝ-၇ဝ%ရှိသည်။ ပေါင် ၁၅ဝ လေးသည့် လူကြီး (ယောက်ျား) = ၁၈ဝဝ ကယ်လိုရီ၊ (BMR)၊ ပေါင် ၁၂ဝ လေးသည့် လူကြီး (မိန်းမ) = ၁၃၂ဝ ကယ်လိုရီ၊ (BMR) ရှိသည်။
ပိန်သောသူတဦး တနေ့လိုအပ်ချက် = (ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်) x ၁၄ ကယ်လိုရီ၊
မပိန်-မဝသူတဦး တနေ့လိုအပ်ချက် = (ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်) x ၁၇ ကယ်လိုရီ၊
အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရသူတဦး တနေ့လိုအပ်ချက် = (ကိုယ်အလေးချိန် ပေါင်) x ၂ဝ ကယ်လိုရီ၊
• ရောဂ-လေ့ကျင်ခန်း သာမန် Stretching: Mild Yoga 22.7
• ၁ဝ မိုင်နှုန်းပြေးခြင်း Running 10 mph (6 min/mile) 145.4
High Fiber Foods (ဖိုင်ဘာ) များသည့် အစားအစာများ
Apples with skin ပန်းသီး အခွံပါ 1 medium 5.00
Banana ငှက်ပျောသီး 1 medium 3.92
Blueberries ဘယ်ရီသီး 1 cup 4.18
Grapefruit စပျစ်သီး 1/2 medium 6.1
Orange လိမ်မော်သီး 1 medium 3.40
Peach မက်မွန်သီး 1 medium 2.00
Pear သစ်တော်သီး 1 medium 5.08
Plum ဆီးသီး 1 medium 1.00
Raspberries ရက်စ်ဘယ်ရီသီး 1 cup 8.34
Strawberries စထောဘယ်ရီ 1 cup 3.98
Broccoli, cooked မုံလာစိမ်း 1 cup 4.5
Brussels sprouts ကွမ်းသီးဂေါ်ဖီ 1 cup 2.84
Cabbage, cooked မုံလာထုပ် 1 cup 4.20
Carrot မုံလာဥနီ 1 medium 2.00
Cauliflower, cooked ပန်းမုံလာ 1 cup 3.43 Corn, sweet ပြောင်းဖူး 1 cup 4.66
Green beans ပဲသီးစိမ်း 1 cup 3.95
Onions ကြက်သွန်နီ 1 cup 2.88
Peas ပဲ 1 cup 8.84
Potato, baked w/skin အာလူးပြုတ် အခွံပါ 1 medium 4.80 Spinach, cooked ဟင်းနုနွယ် 1 cup 4.3 Sweet potato, cooked ကန်စွန်းဥ 1 cup 5.94
Tomato ခရမ်းချဉ် 1 medium 1.00
Bread, whole wheat 1 slice ပေါင်မုံ့ 2.00
Oats, rolled dry အုတ်စပါး 1 cup 12.00
Pasta, whole wheat ပါစတာ 1 cup 6.34
Rice, dry brown ဆန်လုံးညို 1 cup 7.98
Almonds အယ်မုန်း 1 oz 4.22
Cashews သီဟိုဠ်စေ့ 1 oz 1.00
Kidney beans, cooked ကျောက်ကပ်ပဲ 1 cup 13.33
Lentils, red cooked ပဲနီကလေး 1 cup 15.64
Peanuts မြေပဲ 1 oz 2.30
Pumpkin seeds ဖရုံစေ့ 1/4 cup 4.12
Soybeans, cooked ပဲပုတ် 1 cup 7.62
Sunflower seeds နေကြာစေ့ 1/4 cup 3.00Walnuts သစ်ကြားသီး 1 oz 3.08
Contraception and Fertility တားဆေး-တားနည်း ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်
1. Mon, May 14, 2012 at 1:49 PM ကိုယ်ဝန်တားဆေးကို ကြာရှည်စွာထိုးခြင်းကြောင့် ကလေးလိုချင်သောအခါတွင် တားဆေး၏ ဆိုးကျိုးကြောင့် အခက်အခဲရှိပါသလား။ ကလေးရနိုင်ခြေနည်း ပါသလား။ တားဆေးအား အချိန်ဘယ်လောက်ထိသာ သု့းစွဲရန်သင့်ပါသလဲ သိချင်ပါတယ်။
2. Date: 2012/2/15
ကျွန်မက လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားသူပါရှင့်။ လက်ထပ်ပြီး ၆ လလောက် အနည်းဆုံး အချိန်ယူပြီးမှ ကလေးယူချင်ပါတယ်။ အဲဒါ လက်မထပ်ခင်မှာ ကလေး ချက်ချင်းမရအောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့အဆင်ပြေမလဲ အကြံတောင်းချင်လို့ပါ။ ရက်ရှောင်တဲ့နည်းကလည်း ကျွန်မက ရာသီရက် မမှန်တတ်လို့ပါ။ လတိုင်း တလ နှင့် တလ ရက်လုံးဝမတူပါ။ နောက်သို့ ၂ ရက် ၃ ရက်မှ တပတ်အထိ နောက်ဆုတ်တတ်ပါတယ်။ ရာသီရက်ကတော့ ရက် ၂ဝ ကျော် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီကြာချိန်က ၂ ရက် ဖြစ်ပါတယ်။ ၃ လခံဆေးထိုးရင် ရပ်လိုက်တာနဲ့ ကလေးမရဖြစ်မှာလဲ စိုးပါတယ်။ တချို့က ဆေးရပ်ပြီး နှစ်အပိုင်းအခြား ကြာတဲ့အထိ ကလေးမရတတ်ဘူးပြောလို့ စိတ်ပူတာလဲပါပါတယ်ရှင့်။ ဆေးထိုး ဆေးသောက်ခြင်းကို ကျွန်မချစ်သူက မလုပ်စေလိုပါ။ ဘယ်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရမှာပါလဲရှင့်။ ဆေးတွေရဲ့ Side effect ကြောင့် ရောဂါတွေဖြစ်မှာကိုလည်း ကြောက်လို့ပါ။ အမေကလည်း ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ဖူးတာကြောင့်ပါ။ IUD ကလည်း လိင်အတွေ့အကြုံ မရှိဘူးသူနဲ့အဆင် မပြေဘူးသိမှတ်သားရပါတယ်ရှင့်။ Condon ကို သုံးဖို့ရာလည်း ချစ်သူကို ပြောမရမှာ စိုးမိပါတယ်။ လက်မောင်းအောက် ထည့်ပစ္စည်းကလည်း နှစ်အကြာကြီး သားဆက်ခြားချင်သူတွေမှ လုပ်တာ ပိုကောင်းမယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားရှင့်။ Side effect အနဲဆုံးနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးပြန်ရဖို့အလွယ်ဆုံးကို အကြံပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ဘယ်နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရမလဲ တကယ်ကို အခက်တွေ့နေလို့ပါ။
(၃) ကိုယ်ဝန်တား သားအိမ်ထဲထည့်ထားရတဲ့ IUCD ပစ္စည်းပြန်ထုတ်ရင် ချက်ချင်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ သူက မ-မျိုးဥ ထွက်တာကို တားမပေးခဲ့ဘူး။ ဒီလို IUCD/IUD ထည့်တာက မေးတဲ့သူထင်တာနဲ့ နည်းနည်း ဆင်ပါတယ်။ ထည့်မယ် ဆိုရင် (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကို Sims Speculum (Vaginal Retractor) ကရိယာတခု သုံးရတယ်။ တကယ်လို့ Cervix သားအိမ်ဝကလည်း ကျဉ်းနေရင် သားအိမ်ဝကို ကိုယ်တွယ်ဘို့ရာ Vulsellum Forceps ဆိုတာနဲ့ ညှပ်ထားဘို့ လိုနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် မွေးလမ်းကြောင်းကနေ ကလေး မမွေးဘူးသူတွေ အတွက် ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းပါ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသလို နေတတ်တယ်။ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ အခြေအနေကို သိထားပြီး၊ ဆရာဝန်ကနေ အသေအခြာ လုပ်ပေးရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကရိယာ အရွယ်အစား အငယ်စားတွေ ရှိတယ်။ လိုမယ်ထင်ရင် ထုံဆေး-အိပ်ဆေး ပေးနိုင်ပါတယ်။ အပျိုစစ်တွေအတွက်တော့ ခက်ခဲတာ မှန်ပါတယ်။
(၄) ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲပါ Oral Contraceptives စားဆေး သုံးစွဲထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဆေးဖြတ်ပြီးနောက် ကလေးရနိုင်ခြေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ အများကြီးလုပ်ထားတယ်။ University of Dusseldorf ဂျာမန် တက္ကသိုလ်က အဖြေထုတ်တာကတော့ ဆေးဖြတ်ပြီးပြီးချင်း ပဌမလတွေမှာ မ-မျိုးဥပြန်ထွက်လာနိုင်သူ ၅၇့၉% ရှိတယ်။ ၁ဝ့၂၄% မှာ အဲလိုမထွက်ဘူး။ အတူတူ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဆေးမသောက်သူထဲက ၃့၄၄% မှာလဲ မထွက်ဘူး။ တားဆေးသောက်ပြီး ဖြတ်လိုက်သူတွေမှာ နောက်ပိုင်း ရာသီစက်ဝန်း ပိုရှည်တတ်တယ်။ အရင်လိုပြန်ဖြစ်ဘို့ ၉ လအထိ ကြာနိုင်တယ်။
တားဆေး သောက်သူတွေထဲမှာ တခါမှ ကလေးမယူသေးသူနဲ့ အရင်ကလေးရှိဘူးသူ၊ နောက်ပြီး အသက်တွေက မတူကြဘူး။ ကလေးရဘူးသူတွေ နဂိုအနေပြန်ရောက်ဘို့ သူများထက် စောနိုင်တယ်။ ကလေးလဲမယူဘူးသေး၊ အသက်လဲ ၃ဝ-၃၅ နှစ်ဆိုသူတွေက ရင်းစားပြန်ရဘို့ သူများတွေထက် ကြာနိုင်တယ်။
• တကယ်တန်းပြောရရင် ကလေးမရသေးသူတွေကို ဆေးကုပေးရာမှာပါ သုံးရတဲ့ဆေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မှာ သန္ဓေတည်ပေးနည်း IVF ကို ရွေးရတော့တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဒီနည်းမလုပ်ခင်မှာ ရာသီမှန်အောင် ကိုယ်ဝန်တား စားဆေး အရင်ပေးရတတ်တယ်။
Birth Control How Decide ကိုယ်ဝန် တားနည်း-တားဆေး ဘယ်လိုရွေးမလဲ
1. Birth Control Pill ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးများ
2. Birth Control Shot ထိုးဆေး
3. IUD သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့်နည်း
4. Birth Control Implant ကိုယ်ဝန်တား အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ ဆေးချောင်း
5. Birth Control Patch ကိုယ်ဝန်တား ဆေးကပ်ခွါ
6. Male Condom ယောက်ျားသုံး (ကွန်ဒွမ်)
7. Female Condom အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်)
8. Vaginal Ring (ဗဂျိုင်းနား) ထဲထည့်ရတဲ့ ကွင်း
9. Cervical Cap သားအိမ်ဝ အပိတ်
10. Diaphragm သားအိမ်ဝ အဖုံး
11. Birth Control Sponge သုက်ပိုးသတ် ဆေးမြှုပ်
12. Spermicide သုက်ပိုးသတ်ဆေး
13. Fertility Awareness နေ့ကောင်းရက်သာရွေးနည်း
14. Vasectomy ယောက်ျား သားကြောဖြတ်ခြင်း
15. Tubal Ligation အမျိုးသမီး သားကြောဖြတ်ခြင်း
16. Tubal Implants သားအိမ်ပြွန်ထဲ ကိရိယာထည့်နည်း
IUD သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့်နည်း
• IUD ဆိုတာ T-shaped plastic (တီ) ပုံ သဏ္ဌာန် (ပလပ်စတစ်) ပစ္စည်းလေးဖြစ်တယ်။
• Copper IUD, ParaGard တွေကို ၃-၅-၁ဝ-၁၂ နှစ်အထိ ထည့်ထားနိုင်တယ်။
• ဟော်မုန်းပါတဲ့ Mirena က ၅ နှစ်တခါ လဲပေးရတယ်။
Birth Control Implant ကိုယ်ဝန်တား အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ ဆေးချောင်း
• Implanon ဆိုတာ မီးခြစ်ဆံလောက်သာရှိတယ်။
• ကိုယ်ဝန်တား Depo-Provera ထိုးဆေးလိုဘဲ ဟော်မုန်းကို ထုတ်ပေးနေမယ်။
• ၃ နှစ်အထိထားနိုင်တယ်။
Vaginal Ring (ဗဂျိုင်းနား) ထဲထည့်ရတဲ့ ကွင်း
• NuvaRing (ပလပ်စတစ်) အပြေားစား ကွင်းဝိုင်းလေးဖြစ်တယ်။
• Pill သောက်ဆေး နဲ့ Patch ဆေးကပ်ခွါတွေလို ဟော်မုန်းထုတ်ပေးနေမယ်။
• တလတခါ လဲပေးရမယ်။
Birth Control Patch ကိုယ်ဝန်တား ဆေးကပ်ခွါ
• Ortho Evra patch ဆေးကပ်ခွါကို ကြိုက်တဲ့နေရာ အရေပြားမှာ ကပ်ထားနိုင်တယ်။
• တလ (၄ ပါတ်) မှာ ၃ ပါတ်ကို ကပ်ထားပြီး ၁ ပါတ် နားထားရတယ်။
• Birth control pill သောက်ဆေးတွေလို ဟော်မုန်းထုတ်ပေးနေမယ်။
Cervical Cap သားအိမ်ဝအပိတ်
• Diaphragm နဲ့ သဘောတူပြီး သေးငယ်တယ်။
• FemCap ကို (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကနေ အတွင်းနက်နက်မှာရှိတဲ့ သားအိမ်ဝကို ဖုံး-ပိတ်ပေးထားရတယ်။
• Spermicide သုက်ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ပါ ရောသုံးသင့်တယ်။
• Rubber dome ရာဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ခပ်ခုံးခုံးလေးဖြစ်တယ်။
• Cervix သားအိမ်ဝကို ဆက်ဆံမှု မပြုခင်ဖုံးထားပေးရတယ်။
Female Condom အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒွမ်)
• Thin plastic pouch (ပလပ်စတစ်) ပါးပါးလေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အိတ်ငယ်လေးဖြစ်တယ်။
• Vagina (ဗဂျိုင်းနား) ထဲမှာ အလိုက်သင့်ထည့်ထားရတယ်။
• လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခင် ၈ နာရီကတည်းက ထည့်ထားနိုင်တယ်။
Birth Control Sponge သုက်ပိုးသတ် ဆေးမြှုပ်
• Today Sponge ထဲမှာ spermicide foam သုက်ပိုးသတ်ဆေးပါတယ်။
• 24 hours before sex လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခင် ၂၄ နာရီကတည်းက ထည့်ထားနိုင်တယ်။
• Spermicide foam အမြှုပ်၊ Jelly (ဂျယ်လီ)၊ Cream (ခရင်မ်) နဲ့ Film (ဖလင်) သုက်ပိုးသတ်ဆေးတွေ ရှိတယ်။
• (ဗဂျိုင်းနား) ထဲမှာ လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုခင် ထည့်-လိမ်း-သုတ်ထားရတယ်။
Fertility Awareness နေ့ကောင်းရက်သာရွေးနည်း
• Calendar ပြက္ခဒိန်နည်းထက် ပိုတိကျတယ်။
• မျိုးဥထွက်မဲ့ရက်ကို ကိုယ်အပူချိန် နေ့တိုင်း မနက်အိပ်ယာထမှာ တိုင်းပြီးသိမယ်။
• ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သင်တန်းသဘောမျိုး လိုမယ်။
Fertility Awareness Method မျိုးပွါးနိုင်စွမ်းကို လေ့လာစောင့်ကြည့်နည်း
အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်တဲ့နည်း (၃) နည်းရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတန်အသင့် စိတ်ချရတာမို့ လိုအပ်ရင်သုံးနိုင်တဲ့ အရံအတားနည်း၊ အရေးပေါ်နည်းက အဆင်သင့်ရှိနေရမယ်။
၁။ Basal body temperature အပူချိန်မှတ်သားခြင်း
မနက်အိပ်ရာက နိုးရင် ဘာတခုမှ မလုပ်သေးချိန်မှာ ကိုယ်အပူချိန် တိုင်းရတယ်။ လလည်ရက်မှာ မျိုးဥထွက်လို့ ကိုယ်အပူချိန် တက်တာက ဝ့၃ ကနေ ဝ့၆ ဒီဂရီ (ဆဲလ်စီးယပ်စ်) ရှိမယ်။ မျိုးဥမထွက်ခင်မှာ ကိုယ်အပူချိန်က 97° F (36.1° C) ကနေ 97.5°F (36.38° C) အထိ ရှိနေမယ်။ မျိုးဥထွက်လို့ တက်လာရင် 97.6° F (36.4 C) ကနေ 98.6° F (37° C) အထိ ဖြစ်လာမယ်။ မျိုးဥထွက်ပြီး ၁-၂ ရက်မှာ တက်လာတယ်။ မျိုးဥက သုက်ပိုးနဲ့ မတွေ့ရရင် ၂၄ နာရီသာ ရှင်နေလို့ အပူချိန်တက်ပြီး ၃ ရက်နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရဘို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
၂။ Cervical mucus သားအိမ်ဝက အချွဲကိုစစ်ဆေးနည်း
Cervix သားအိမ်ဝကို ကိုယ့်လက်ချောင်းနဲ့ စစ်ရတယ်။ ရာသီလာနေချိန်မှာ အကျိအချွဲ အနည်းဆုံးရက်တွေ ဖြစ်တယ်။ နောက်မှာ (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်းကြောင့် သားအိမ်ဝက အချွဲပိုများလာတယ်။ ပိုပြီး ဆွဲဆန့်လို့ ရလာတယ်။ မျိုးဥထွက်ပြီး နောက်မှာ ထွက်လာတဲ့ (ပရိုဂျင်စတီရုံး) ဟော်မုန်းကြောင့် ခြောက်သွေ့လာမယ်။ ဒါ့ကြောင့် သားအိမ်ဝက အချွဲအများဆုံး အချိန်ရဲ့နောက် ၄ ရက်ကစပြီး ကိုယ်ဝန်မရစေနိုင်ဘူး။
၃။ Cervical position သားအိမ်ဝအခြေအနေ
Cervix သားအိမ်ဝဟာ မျိုးဥထွက်ခါနီးရင် ပိုပျော့လာမယ်။ ပိုပွင့်လာမယ်။
Options for Older Women အသက်မငယ်သူများအတွက် ရွေးချယ်နည်း
• အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်လာရင် သတိထားပြီး အကောင်းဆုံးနည်းကို ရွေးရမယ်။
• လူနေမှုပုံစံလဲ ပြောင်းသင့်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်း-လျှော့ပါ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ အစားအသောက် ဂရုစိုက်ပါ။ အရက်-ဆေးလိပ် လျှော့ပါ-ဖြတ်ပါ။
• ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှ အကောင်းဆုံး သန္ဓေတားနည်းကို ရွေးချယ်ပါ။
Combination injection နောက်ပေါ်ထိုးဆေးနည်း
• Medroxyprogesterone acetate (ပရိုဂျက်စတီရုံး) နဲ့ Estradiol cypionate (အီစထိုဂျင်) ရောထားတဲ့ထိုးဆေးကို တလတခါထိုးရတယ်။ Lunelle ခေါ်တယ်။
• ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါ စားဆေးတွေလိုဘဲ သတ္တိရှိတယ်။
• ဆေးမထိုးတဲ့လမှာ ကလေးပြန်ရနိုင်တယ်။ တချို့က ချက်ချင်းဆိုသလို ကိုယ်ဝန်ရစေပြီး တချို့မှာ ၂-၃ လ စောင်ရတယ်။
• ၉၉့၈% ထိရောက်တယ်။ အမေရိကားမှာ ဒီဆေး တနှစ်ထိုးတဲ့ အမျိုးသမီး ၇၈၂ ယောက်မှာ ကိုယ်ဝန် မရတာတွေ့ရတယ်။
• တခါထိုးပြီး နောက်တခါကို ၂၈-၃ဝ ရက်အကြာမှာထပ်ထိုးရမယ်။ ၃၃ ရက်ထက်တော့ နောက်မကျရဘူး။ ရာသီလာတဲ့ရက်ကို ကြည့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။
• Lunelle ဆေးစထိုးရင်
o ရာသီသွေးစဆင်းတဲ့ရက်နောက် ၅ ရက်အတွင်း၊
o ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီး၊ ဖျက်ပြီးတဲ့နောက် ၅ ရက်အတွင်း၊
o ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက် ၄ ပါတ်အတွင်း၊
o ကလေးနို့တိုက်ရင် မွေးပြီးတဲ့နောက် ၆ ပါတ်အတွင်း၊
How to Decide ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ
၁။ Most Effective Methods ထိရောက်မှု အများဆုံးနည်းတွေ
• Implant အရေပြားအောက် ဆေးချောင်း၊ IUD သားအိမ်ထဲထည့် ပစ္စည်း၊ Vasectomy, Tubal methods သားကြောဖြတ်ခြင်းများ၊ = 99%
• Birth Control shot ထိုးဆေး၊ = 97%
• Birth Comtrol Pill စားဆေး၊ Vaginal Ring (ဗဂျိုင်းနား) ကွင်း၊ = 92-95%
• Condom (ကွန်ဒွမ်)၊ Diaphragm, Cervical Cap သားအိမ်ဝအဖုံး-အပိတ်၊ Sponge ဆေးမြှုပ်၊ = 84-89%
၂။ Least Effective Methods ထိရောက်မှု အနည်းဆုံးနည်းတွေ
• No Birth Control အကာအကွယ် လုံးဝမသုံးခြင်း = 85% Pregnant
Male Condom ယောက်ျားသုံး (ကွန်ဒွမ်)
Tubal Ligation အမျိုးသမီး သားကြောဖြတ်ခြင်း
Birth Control Shot ထိုးဆေး
1. Depo Provera Injection (ဒီပို) ထိုးဆေး
2. Depo-subQ Provera 104 Injection (ဒီပို-ဆပ်ကျူ) ထိုးဆေး
3. Combined Contraceptive Injection ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲပါ ထိုးဆေး
4. Noristerat injection (နော်ရစ်တားရက်) ထိုးဆေး
Depo Provera Injection (ဒီပို) ထိုးဆေး
• DMPA လို့လဲခေါ်တယ်။
• Progestin medroxyprogesterone acetate 150 mg ဟော်မုန်းပါတယ်။
• IM အသားဆေးဖြစ်တယ်။ တင်ပါး၊ ပေါင်နဲ့ လက်မောင်းမှာ ထိုးနိုင်တယ်။
• တနှစ် ၄ ခါ၊ ၃ လ (၁၁-၁၄ ပါတ်) တခါထိုးရတယ်။
• 50 mg ပါတာက တလခံဖြစ်တယ်။
• ဆေးမထိုးခင်က ကိုယ်ဝန်မရှိတာ သေခြာရင် ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်။
Depo-subQ Provera 104 Injection (ဒီပို-ဆပ်ကျူ)
• နောက်ထပ်ပေါ်တဲ့ အလားတူ ၃ လခံ ထိုးဆေးဖြစ်တယ်။
• သူ့ထဲမှာ Medroxyprogesterone acetate 104 mg သာပါလို့ ဟော်မုန်းက ၃၁% ဘဲပါတယ်။
• ဒါကြောင့် Progestin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေကို နည်းစေတယ်။
• subQ လို့ အသေအခြာရေးတာက Subcutaneous S/C အရေပြားအောက်မှာဆေးထိုးရလို့ ဖြစ်တယ်။ ဆေးထိုးအပ်သေးသေးသာသုံးဘို့လိုတာမို့ နာတာသက်သာမယ်။
• ဗိုက်နဲ့ ပေါင်က အရေပြားမှာထိုးသင့်တယ်။
• တနှစ် ၄ ခါ၊ ၁၂-၁၄ ပါတ် တခါ ထိုးပါ။
Combined Contraceptive Injection ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲပါ ထိုးဆေးနည်း
• Mesigyna နာမည်နဲ့ ထိုးဆေးထဲမှာ Estradiol valerate နဲ့ Norethisterone enantate ပါတယ်။
• (ပရိုဂျက်စတီရုံး) နဲ့ (အီစထိုဂျင်) ရောထားတဲ့ထိုးဆေးဖြစ်တယ်၊
• တလတခါထိုးရတယ်။ Lunelle ခေါ်တယ်။
• Depo-Provera (၃) လခံထိုးဆေးလိုဘဲ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါတယ်။ ဆေးစွမ်းရော သတိထားစရာတွေပါ တူတယ်။
• တလတခါ ထိုးရတယ်။
• အမေရိကားမှာ ၂ဝဝဝ မှာစသုံးနေတယ်။ ဆေးတခါတည်းထည့်ပြီးသား ဆေးထိုးအပ်တွေကို စိတ်မချရလို့ ၂ဝဝ၂ မှာ ပြန်သိမ်းခဲ့သေးတယ်။ ၂ဝဝ၃ ကထုတ်တာတွေကို စိတ်ချလက်ချသုံးနေတယ်။
• Lunelle နဲ့တူတဲ့ တခြားထိုးဆေးနာမည်တွေက Cyclofem, Cyclofemina, Feminena, Novafem, Lunella, and Cyclo-Provera ဖြစ်တယ်။
• Mesigyna နဲ့တူတဲ့ တခြားထိုးဆေးနာမည်တွေက Norigynon, Mesigyna Instayect, Mesygest, and No3injectable Norigynon တွေဖြစ်တယ်။• ဆေးမထိုးတဲ့လမှာ ကလေးပြန်ရနိုင်တယ်။ တချို့က ချက်ချင်းဆိုသလို ကိုယ်ဝန်ရစေပြီး တချို့မှာ ၂-၃ လ စောင့်ရတယ်။
• တခါထိုးပြီး နောက်တခါကို ၂၈-၃ဝ ရက်အကြာမှာ ထပ်ထိုးရမယ်။ ၃၃ ရက်ထက်တော့ နောက်မကျရဘူး။ ရာသီလာတဲ့ရက်ကို ကြည့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။
o ရာသီသွေး စဆင်းတဲ့ရက်နောက် ၅ ရက်အတွင်း၊
o ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီး၊ ဖျက်ပြီးတဲ့နောက် ၅ ရက်အတွင်း၊
Noristerat injection (နော်ရစ်တားရက်) ထိုးဆေးက တမျိုးဖြစ်တယ်။ အမေရိကားမှာ မရဘူး။
• Synthetic progestin နဲ့ Norethisterone enantate တွေပါတယ်။ • (၈) ပါတ် ၂ လ ခံတယ်။ ထပ်ထိုးလို့လဲ ရပါတယ်။
• ရေတို ကိုယ်ဝန်တားဘို့သာ သုံးကြတယ်။ ဥပမာ -
o Vasectomy ယောက်ျားကို သားကြောဖြတ်ထားတုံး စိတ်မချရသေးခင်မှာ မိန်းမကို ထိုးပေးတယ်။
o Rubella ဂျာမန်-ဝက်သက်ရောဂါတွေဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်မယူသင့်သေးလို့ မိန်းမကိုထိုးပေးတယ်။
• မျိုးဥထွက်မှာကိုတားပေးတယ်။ ဆေးထိုးပြီး ၈ ပါတ်နေရင် သားအိမ်အဝက အချွဲတွေစေပျစ်လာစေတယ်။
• Doryxas, Norethisterone injectable, Norigest, Nur-Isterate, Syngestal နဲ့ Unidepo နာမည်တွေနဲ့လဲ လာတယ်။